Ahoana ny fomba tsy hahombiazana amin'ny Snapchat | Martech Zone
Zoma 18 Novambra 2016 Alahady 15 Janoary 2017 Chris Gomersall
Mampientanentana ny tontolon'ny varotra Fangatahan'i Snapchat ho an'ny IPO ary fanombohana ny fampisehoana (amin'ny ankapobeny ny zava-drehetra Google Glass dia tsy). Saingy ny tena firesahana ny Snapchat dia mbola maro ny mpivarotra mikorisa ny loha. Mandritra izany fotoana izany, sioka, tanora ary, fantatrao fa, millennials mamoaka ny fony kely. Toa sahala amin'ny nahazoan'ny marika ny sehatra nomerika vaovao fotsiny izy ireo, dia ampidirina amin'ny iray hafa - na farafaharatsiny fiasa vaovao misy efa misy.
Andao hojerentsika ny statistika Snap sasany:
@Snapchat dia mahazo sary an-dahatsary 10 miliara isan'andro ary nitombo hatramin'ny 2 miliara ka lasa 12 tapitrisa mahery ny fahitana horonantsary isan'andro tao anatin'ny taona iray
60% n'ny mpampiasa finday avo lenta rehetra no mampiasa ny fampiharana @Snapchat
25-30 minitra no salan'isa fampiasana Snapchat isan'andro
Maherin'ny 50% ny mpampiasa isan'andro isan'andro dia 25 sy mihoatra
Mifindra monina amin'ny sehatra marobe ny mpampiasa Facebook
Tao anatin'ny 5 taona monja, Snapchat dia nitombo ho sehatra sosialy lehibe fahatelo - ary mbola mitombo hatrany
Na dia eken'ny ankamaroan'ny marika aza fa tokony mijanona Snapchat, indrindra fa ny statistika mandatsaka valanorano ao ambadiky ny fitomboany sy ny fampiasana azy, ny maha-ON ny lampihazo dia hafa noho ny MAMPIASA ny sehatra. Ny hevitra momba ny Snapchat dia mahaliana amin'ny mpivarotra, fa eo matetika no iafarany. Ny marina maharary dia ny mpivarotra tsy mahalala hoe aiza no hanombohana rehefa miresaka momba ny Snapchat.
Ny lakilen'ny fisorohana ny tsy fahombiazan'ny Snapchat dia ny tsy fampidirana azy ao amin'ny sokajy haino aman-jery sosialy ankapobeny, satria manana nuansa maro izay mampiavaka azy betsaka noho ny Facebook, Twitter na Instagram. Ny tolotra lehibe an'ny Snapchat dia mampiavaka azy amin'ireo sehatra telo rehetra.
Raha manandrana mampiditra Snapchat ao amin'ny paikadin'ny media sosialy ny marika ary mamerina mamorona ny atiny ho an'ny Twitter, Facebook, Youtube na Instagram dia tsy hahomby izy ireo.
Ireto misy fomba efatra handresena amin'ny Snapchat
Mandefasa atiny amin'ny Snapchat izay tsy hitan'ny mpampiasa any an-kafa - Ny atiny Snapchat dia tokony hidika koa hoe atiny manokana Snapchat. Tian'ireo mpanjifa ny fidirana amin'ny mombamomba ny marika izay tsy ananan'ny mpampiasa hafa. Manasongadina ny atiny farany mahomby sy miasa tsara miaraka amin'ny foto-kevitry ny exclusivity. Tsy afaka mizara izay tsy misy intsony ireo mpampiasa, midika izany fa natokana ho an'ireo mpampiasa Snapchat ihany ny atiny. Raiso, ohatra, ny fomba Nampiasa an'i Snapchat irery i Ford hanambara SUV subcompact vaovao tamin'ny herinandro lasa. Ilay fampielezan-kevitra, izay nikendry ireo mpamily an'arivony taona maro, dia nanasongadina ny kintana Snapchat DJ Khaled sy ny toeram-piantsonana voafitaka tsy lavitra an'i Hollywood Boulevard any Hollywood, California.
Mampiasà atiny lany daty hamoronana hamehana - Iray amin'ireo lafiny miavaka indrindra amin'ny Snapchat ny atiny lany daty. Ny famelana ny atiny ho lany daty, na ny hanjavona aorian'ny fotoana voafaritra, dia mifanohitra amin'ny sain'ny ankamaroan'ny manam-pahaizana momba ny marketing. Fa maninona no mamorona zavatra mba hiala fotsiny? Ny famelana ny atiny ho lany daty dia miteraka fahatsapana fa maika ny mpanjifa. Io no faratampony amin'ny "mihetsika ankehitriny." Ho an'ny marika iray, ny fanomezana atiny izay miasa ao anatin'ny vanim-potoana lany daty dia mandrisika ny mpanjifa hanao zavatra haingana ary hirotsaka haingana.
Mampiasà sivana fotoana voafetra hifandraisana amin'ireo mpanaraka - Vao tsy ela akory izay, ny marika dia nanomboka nanolotra fotoana voafetra na mampiasa sivana Snapchat. Tsy ny taktika miasa ao anatin'ny foto-kevitra afa-po Snapchat ihany no miasa, fa mamela ny marika hifandray amin'ireo mpampiasa manaraka azy ireo, sy amin'ireo mpanaraka azy hafa. Tamin'ny volana septambra 2016, Bloomingdale's natomboka Snapchat dia nanamboatra "hazalambo scavenger" hampiroborobo ny tadin'ny akanjo latsaka. Ireo mpividy an'i Bloomingdale dia nitady sivana nafenina nanerana ireo fivarotana teo an-toerana nanerana ny firenena mba hahazoana loka. Nandritra ny telo andro dia nihazakazaka ny fifaninanana - iray millisecond amin'ny resaka marketing. Ny marika hafa dia nampiasa sivana fotoana voafetra mba hampiroboroboana ny fifanarahana na tolotra manokana, na hanosehana fotsiny ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika. Ny rehetra dia fomba marani-tsaina hampiasan'ny marika Snapchat.
Aza hadino - Ny mpanjifa ankehitriny dia mahatsapa fa amidy amin'ny kilaometatra iray kilaometatra izy. Tian'izy ireo ny mamorona fifandraisana amin'ireo marika ampiasainy. Raha mieritreritra ny hampiroborobo ny marikao amin'ny alàlan'ny Snapchat ianao dia tokony handany atiny Snapchat betsaka araka izay tratranao. Hanampy anao hifandray amin'ny mpihaino kendrenao izany ary hizara atiny izay zava-dehibe amin'izy ireo. Na dia manjary mihodina tanora kokoa aza ny mpampiasa Snapchat, ny fitomboan'ny sehatra dia tokony ho ampy mba hitazoman'ireo mpivarotra izany amin'ny radarany.
Raha Snapchat no resahina, ny fanontaniana dia tsy hoe "tokony?" Saingy “Ahoana no Tokony hanao izany ve isika? ”
Tags: marinasivanasnapchatsivana snapchatfampisehoana
Chris Gomersall no mpanorina sy CEO an'ny ATOMIZED, orinasan-rindrambaiko marketing any Atlanta, GA. Talohan'izay, Chris dia Strategiste Creative ao amin'ny Facebook sy Instagram izay niarahany niasa tamin'ny marika sy masoivoho lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, nametraka patanty, niara-niasa tamin'ny antropolojika ara-tsosialy sy mpahay siansa momba ny angon-drakitra, nanangana prototypes niaraka tamin'ny injeniera, bootcamp programa famoahana firaketana, sns. Teo aloha ny mpitarika famoronana tao Moxie, sampan-draharaha hafa dia misy ny Euro RSCG (DSW), Exile amin'ny fahafito (Agency.com), ary fanombohana azy.
Inona no atao hoe TLD? Nohazavaina ireo sehatra ambony